बिनय जंग बस्नेत जेल बाट रिहा भए।। भन्छन् सत्यको जित भो ;मैले केही गल्ती गरेको थिएन( भिडियो सहित) – NepalajaMedia
March 10, 2021 168
यो समाचारको भिडियो अन्तिममा छ कृपया पुरा हेरि प्रतिक्रिया दिनुहोला
बिनय जंग बस्नेत भर्खरै धरौटीमा रिहा भएका छन । रिहा भए संगै खुसी हुँदै भने न्याय मरेको रहिनछ गर्दै नगरेको गल्तिको सजाय भोगे।।
उनलाई जेल बाट रिहा भएपछि फुलमालाले स्वागत गरिएको छ।। रिहाई हुँदा पुन्य गौतमको पनि उपस्तिथि थियो।।।
हिजो ५ लाख जरिवाना र १ बर्ष जेल हुने जस्ता समाचार आए पनि उनी ५० हजार धरौटीमा आज रिहा भए अब आगामी दिनमा पनि बेबारिसे बेबस्थापनमा निरन्तर लागि रहने उनको भनाइ छ।।।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले अनुसन्धान सकेर विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसारको कसुरमा सजाय मागदाबी गर्दै प्रतिवेदन बुझाइएको बताए ।
Prevजब अमेरिकामा एक नेपाली युवाकलाइ ३ जना युवतीले कार भित्रै ….!
Nextभोलि महाशिवरात्रि फाल्गुन २७ गते बिहिबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
टिकटकमा नानाथरी बोलेर भाइरल हुन खोज्ने युवा मलेसियामा प’क्राउ